Raw Orlistat Powder (96829-58-2) Vagadziri - Phcoker Chemical
Raw Orlistat poda mushonga unoshandiswa pakurapa kufutisa. Basa rayo rekutanga ndere kudzivirira kutorwa kwemafuta kubva mukudya kwevanhu….
Raw Orlistat poda iri mukirasi yemishonga inonzi lipase inhibitors iyo inoshanda nekuvharira kunwa kwe25% yemafuta muchikafu uye inoshandiswa pakurema uremu muvakuru vanhu vakawandisa, makore gumi nemasere zvichikwira, kana ichishandiswa pamwe neakadzikira-koriori uye kudya kwakaderera-mafuta. Raw Orlistat powder mushonga wakagadzirirwa kurapa kufutisa. Basa rayo rekutanga ndere kudzivirira kunwa kwemafuta kubva mukudya kwevanhu, nekudaro kudzikamisa kudya kwecalori. Raw Orlistat poda inoshanda nekudzivirira pancreatic lipase, enzyme iyo inoputsa triglycerides mumatumbu. Pasina iyi enzyme, triglycerides kubva kuchikafu inodzivirirwa kubva kuhydrolyzed kupinda isingabatike yemahara emafuta acids uye yakanyururwa isina kugayaniswa. Prescription Raw Orlistat poda inoshandiswa muvanhu vakafuta kupfuura avo vanogona zvakare kuve neakakwira BP, chirwere cheshuga, yakakwira cholesterol, kana chirwere chemwoyo. Kubudirira kweRaw Orlistat poda mukusimudzira kuonda kuri pachena asi kune mwero. Yakaunganidzwa dhata kubva kumakiriniki miedzo inoratidza kuti vanhu vakapihwa Raw Orlistat poda mukuwedzera kune mararamiro maratidziro, senge kudya uye kurovedza muviri, vanorasikirwa nezve 18-2 kilograms (3-4.4 lb) kupfuura avo vasiri kutora mushonga mukati megore. Raw Orlistat poda zvakare zvine mwero inoderedza kukanganiswa kweropa uye inoita kunge inodzivirira kutanga kwerudzi 6.6 chirwere cheshuga, kungave kubva pakurasikirwa nehuremu hwayo kana zvimwe zvinokanganisa. Iyo inoderedza kuitika kweshuga yerudzi rwechipiri mukati mevanhu vakafutisa kutenderedza huwandu hwakaenzana hunochinja mararamiro.
Raw Oroldat powder (96829-58-2) Tsanangudzo
Product Name Raw Orlistat powder
Kemikari Name Tetrahydrolipstatin, 1-((3-hexyl-4-oxo-2-oxetanyl)methyl)dodecyl-2-formamido-4-methylvalerate
muchiso Name Alli, Xenical
Kirasi yeMishonga lipase inhibitors
Molecular Wsere 495.745 g / mol
Kunyorera Point <50 ° C
Biological Half-Life Kubva pane data shoma, hafu yehupenyu yehuta yeRaw Orlistat inowanikwa muZ1 kusvika kumaawa 2.
chengetedzo Temperature storage temp. 2-8 ° C
APane Shandisa kurapa kuneta.
Raw Orlistat powder (96829-58-2) Tsanangudzo
Ropa raWorlistat rinenge riri mukirasi yemishonga inonzi lipase inhibitors inoshanda nekudzivirira kubatwa kwe25% yemafuta muchikafu uye inoshandiswa kurerutsa kuwanda kwevanhu vakuru, kunyanya kushandiswa-nekoriori uye zvokudya zvakaderera-mafuta.
Raw Oroldat powder is drug in order to treat fatness. Basa rayo guru nderokudzivirira kunwa kwemafuta kubva pakudya kwevanhu, nokudaro kuderedza caloric kudya. Raw Oroldat powder inoshanda nekudzivisa pancreatic lipase, enzyme inoputsa triglycerides mumukumbo. Pasina iyi enzyme, triglycerides kubva pakudya kunodziviswa kuti isasvibiswa kuti ive yakawanda isina mafuta yakawanda acid uye yakanyanyiswa isina kupfuura. Purojekiti Yakawanda yeOrlistat powder inoshandiswa muhuwandu hwevanhu vanokwanisa kuve nehuwandu hwehutano hwehuropa, chirwere cheshuga, high cholesterol, kana chirwere chemwoyo. Kubudirira kweRaw Orlistat powder mukusimudzira kurasikirwa kwemazivi kunotsanangura asi kuzvininipisa. Zvinyorwa zvinyorwa kubva kumakiriniki ekuongorora zvinoratidza kuti vanhu vakapa mafuta eWorldat Rawd kuwedzera kune mararamiro ehupenyu, zvakadai sekudya uye kuita zvekuvhima, vanorasikirwa ne 2-3 kilograms (4.4-6.6 lb) kupfuura avo vasingatori mishonga pamusoro pegore. Raw Oroldat powder uyewo zvishoma nezvishoma inoderedza kushanda kweropa uye inoita seyakadzivirira kutanga kwechirongwa che 2 chirwere cheshuga, zvichibva pakurema kwega pachako kana zvimwe zviitiko. Iyo inoderedza kusangana kwechirwere cheshuga chechipiri muvanhu vanorema zvakapoteredza mutengo wakafanana wekuchinja mararamiro anoita.
Orlistat powder (96829-58-2) Mechanism of Action
Orlistat poda rudzi rwe lipase inhibiting uremu hwekurasikirwa nemushonga uye inogadzirwa nehydrated ye lipostatin. Orlistat zvinobudirira uye zvakasarudzika inhibits mudumbu lipase uye pancreatic lipase, asi isina chinokanganisa mamwe enzyme enzyme (senge amylase, trypsin uye chymotrypsin) uye pane phospholipase, uye haina kukanganisa kunwa kwemakabohydrate, protein uye phospholipids. Mushonga uyu hauna kunyudzwa kunyangwe ura hwemudumbu uye hune chinogadziriswa chinodzivirira maitiro pane lipase. Orlistat inogadzirisa ma enzymes nekusunga kwakabatana kune iyo serine masara pane anoshanda nzvimbo dzemudumbu uye pancreatic lipase. Izvi zvinodzivirira mafuta ari muchikafu kubva mukutyorwa ave mahara fatty acids uye diacylglycerol, saka haigone kunyudzwa, kudzikisa kudya kwecaloric uye nekudaro kudzora huremu hwemuviri. Mushonga uyu haudi kubatwa nemuviri wese kuti utange kushanda. Orlistat's pharmacological chiitiko chiitiko chinotsamira: mushonga wekurapa weOrlistat (120mg / d, tid, yakatorwa nezvikafu), inosanganiswa neakaderera-koriori chikafu, inogona kudzikisira kusvika ku30% yemafuta ekumwa. Mune chidzidzo ichienzanisa vanozvipira uye vakafutisa vanozvipira, Orlistat yaisanyanya kunyudzwa nemuviri zvachose uye yaive neakadzika kwazvo kuwanda kweropa. Mushure meimwe chete muyero muyero (iyo hombe iri 800mg), kuwanda kweropa kweOrlistat mumaawa masere anotevera yaive <8 ng / ml. Kazhinji, muyero wekurapa weOrlistat unongo nyudzwa zvishoma nemuviri uye hauzoungane munguva pfupi yekurapa. Mune in vitro kuyedza, yeOrlistat yekusunga chiyero nemamwe maSerum mapuroteni akapfuura 5% (akasungwa mapuroteni ainyanya kuve lipoprotein uye albumin), uye chiyero chayo chekusunga nemaseru eropa akatsvuka.
Makomborero eOrlistat powder (96829-58-2)
▪ Orlistat inoderedza uremu hwemuviri neinopfuura makumi maviri muzana% zvichishandisa mafuta emuviri
▪ Orlista inobatsira iwe kudzidza kuverenga macalorie
▪ Orlista inokupa iwe kunzwa kwekugara zvakanaka
▪ Orlista ine mibairo yakanaka inopa kuvimba uye mufaro kune vashandisi
▪ Orlista inopa mhedzisiro yenguva refu
▪ Orlista inoderedza kukomba kwezvirwere senge hypotension, chirwere cheshuga, atherosclerosis uye
Yakakurudzirwa Orlistat powder (96829-58-2) Dosage
Nhamba yakakurudzirwa yeOrlistat powder is one 120-mg capsule katatu pazuva uye imwe yega yekudya kukuru ine mafuta (panguva kana kuti kusvika paawa 1 mushure mekudya). Maitiro anopfuura 120 mg katatu pazuva haana kuratidzirwa kupa humwe rubatsiro.
Vanhu vanofanira kunge vari pakudya kunovaka muviri kwakaderera, kuderedza-calori inenge inenge 30% ye makoriyori kubva kumafuta. Kudya kwemazuva ose, mafuta, makedhaidhyidhe, uye mapuroteni kunofanira kugoverwa kudarika zvokudya zvitatu zvikuru. Kana chikafu chisingafadzi kana kuti chisina mafuta, chirwere cheOrlistat poda chinogona kubviswa.
Nekuti Orlistat poda yakaratidzirwa kudzikisa kunwa kwemamwe mavhitamini ane mafuta uye betacarotene, vanhu vanofanirwa kurairwa kutora multivitamin ine mavhitamini ane mafuta-kuti ave nechokwadi chekudya kwakakwana. Kunze kweizvozvo, iyo vhitamini yekuwedzera inofanirwa kutorwa kanokwana 2 maawa pamberi kana mushure mekutungamira kweOrlistat poda, senge panguva yekurara.
Zvimwe zvikanganiso zveOrlyatat powder (96829-58-2)
Zvinowanzoitika kuona zvidimbu zvehuta kana Orlistat kana uchitishandisa. Iwe unogona kuwana mamwe emigumisiro kana kwete sekunge watora chero mimwe mishonga. Zvizhinji zvemigumisiro inouya nekushandiswa kweOrlyatat powder yakabatana nenzira iyo inoshanda nayo mumagadzirirwo ako. Zvinowanzova zvinyoro uye zvinogara zvichiitika kana uchitanga kurapwa. Zvinowanzoitika mushure mokunge watora kudya kwemafuta akawanda. Nenzira, vazhinji vavo vanoenda sezvo kurapwa kuchiri mberi uye mushure mekutevera kudya kwakakodzera.
Izvozvi ndezvimwe zvinowanzovhiringidza:
▲ kurwadziwa nemusoro
▲ Kusuruvara kwemuviri / kukanganiswa
▲ Kusununguka kwemafuta
▲ Fatty stools
▲ Ganda ganda rinopisa
▲ Kutambudzika shure
Kunze, kana iwe uchienda kune imwe yemigumisiro iyi, iwe unofanirwa kuitora semhepo inokurumidzira nekudana chiremba pakarepo. Vari;
▲ Kutambudzika kwakanyanya kwemuviri kusingaendi.
▲ Hives kana kupfutidza zvakanyanya
▲ Dambudziko kukumedza
▲ Kuoma kufema kufema